Boom Beach 38.106 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 38.106 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Boom Beach
Boom Beach ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သဲသောင်ပြင် Boom မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်: အစီအစဉ်နှင့်အတူလာသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်အတွက်ချန်!
ဒီမော်ကွန်းတိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာကိုဂိမ်းအတွက်ဦးနှောက်နှင့် brawn နှင့်အတူဘေးဥပဒ် Blackguard တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်။ ခါလဒဲပြည်သားကြှနျးသူကြှနျးသားအားလုံးကိုနှင့်ဤအပူပိုင်းပရဒိသု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို unlock မှတိုက်ခိုက်ရန်သူခြေစွပ်။ အတူတူရန်သူအပေါ်ယူကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားတစ်ဦး Task Force ဖန်တီးပါ။ Scout, အစီအစဉ်, ထို့နောက်ကမ်းခြေ Boom!
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Boom သဲသောင်ပြင်ကို download လုပ်ရန်နှင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများကိုလည်းမှန်ကန်သည်ငွေကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤ feature ကိုအသုံးပြုချင်မလျှင်, သင်၏ Google Play Store app ရဲ့ setting ထဲတွင်ဝယ်ယူမှုများအတွက် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဖွင့်ထားပေးပါ။
- အခြားကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ Play ပြန်ပေးသည်ရန်သူစစ်စခန်းများကိုရာပေါင်းများစွာ RAID
- ကြီးမားသောအပူပိုင်းကျွန်းစု Explore နဲ့ဘဝကို crystal ဟာ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အာဏာရှာဖွေတွေ့ရှိ
- fearsome Blackguard Boss ရင်ဆိုင်ရနိုင်နှင့်သူတို့၏မကောင်းသောအအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်
- Co-op မစ်ရှင်အပေါ်ယူမှတစ်ဦး unstoppable Task Force ဖွဲ့စည်းရန်အခြားကစားသမား Join
Boom Beach အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Boom Beach အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Boom Beach အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Boom Beach အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 6.64k 11.85M
Boom Beach ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Boom Beach အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 38.106
လက်မှတ် SHA1: C5:68:F7:35:B1:29:42:30:14:93:82:83:80:9A:36:DE:A8:EB:D3:A4
Boom Beach APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ